နာကျင်ခဲ့ဖူးရင် မှတ်ထားပါ …. – Shinyoon
နာကျင်ခဲ့ဖူးရင် မှတ်ထားပါ ….
ဘဝမှာ ရေစက်ရှိလို့ဆုံရတဲ့သူတွေရှိသလို ဝဋ်ကြွေးရှိလို့ဆုံရမယ့်လူတွေလဲ အများကြီးပါ ။ ဒီထဲမှာမှ ကိုယ့်ကိုနာကျင်အောင်လုပ်မယ့်လူတွေက နှစ်မျိုးစလုံးဖြစ်နေနိုင်တာကလဲ အမှန်တရားပါ ။
အဲ့လို တစ်စုံတစ်ယောက်က နာကျင်စေတဲ့အခါ … ဘာဖြစ်ပါစေ ညာဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့ ကျိန်စာတွေမတိုက်နဲ့ ။ သူ့အလှည့်ကိုယ့်အလှည့်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ လက်စားချေဖို့လဲ မတွေးနဲ့ ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ရခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုတော့ မှတ်ထားပါ ။
ပြတ်သားလိုက်ပါဆိုတာ တချို့လူတွေအတွက် မခက်ခဲပေမယ့် တချို့လူတွေအတွက်ကျတော့ ပြတ်သားဖို့တကယ်ကို ခက်ခဲတတ်တယ် အနည်းဆုံးတော့ ရခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာတွေကို မှတ်ထားတတ်တဲ့ အကျင့်လေး မွေးစေချင်တယ်
လူတစ်ယောက် ရင့်ကျက်သွားဖို့ဆိုတာ ဒဏ်ရာတွေ လိုတာမဟုတ်ပဲ ရလာတဲ့ဒဏ်ရာတွေအပေါ် ယူတတ်တဲ့ သင်ခန်းစာတွေ လိုတာပါ … ခဏခဏ နာကျင်ရပေမယ့် အရင်လိုပဲ မေ့လွယ်ပျောက်လွယ်သွားမယ်ဆိုရင် နောက်တစ်ကြိမ်နာကျင်နေရမှာဆိုးတယ်
သူ င့ါကို ဒီလိုနာကျင်စေခဲ့တာပါလားဆိုတဲ့ သင်ခန်းစာလေးရသွားတဲ့အခါ နောက်တစ်ယောက်က ကိုယ့်ကို နာကျင်စေတော့မယ့်အခါ အနည်းဆုံးတော့ ရှောင်တတ်ရှားတတ်သွားတာပေါ့ ။
ဒီလူကြောင့် ငိုခဲ့ရဖူးတယ်ဆိုရင် အနည်းဆုံးတော့ အဲ့လူအကြောင်း နားလည်သွားတာပေါ့ ။ မှတ်ထားပါဆိုတာ သင်ခန်းစာတွေ ယူနိုင်ဖို့ပါ စာတတ်သွားတဲ့အခါ ဘဝက ထင်သလောက်မခက်ခဲတော့တာအမှန်ပါ
အဖော်တွေမက်ခဲ့တဲ့ အကျင့်ကြောင့် နာကျင်ခဲ့ရတယ်ဆိုရင် တစ်ယောက်တည်းနေတတ်လာလိမ့်မယ် ။ ဘယ်အရာမဆို ပြောပြတတ်တဲ့အကျင့်ကြောင့် ပြောစရာအတင်းတွေ ရသွားခဲ့တယ်ဆိုရင် နောက်တစ်ခါ မြိုသိပ်တတ်လာလိမ့်မယ် ။ ဒီလိုအမှားတွေကြားက သင်ခန်းစာတွေ ယူတတ်ဖို့ ဒီတစ်ခါ နာကျင်ရတဲ့အခါ မှတ်ထားပေးပါ ။
နာက်င္ခဲ့ဖူးရင္ မွတ္ထားပါ ….
ဘဝမွာ ေရစက္ရွိလို႔ဆုံရတဲ့သူေတြရွိသလို ဝဋ္ေႂကြးရွိလို႔ဆုံရမယ့္လူေတြလဲ အမ်ားႀကီးပါ ။ ဒီထဲမွာမွ ကိုယ့္ကိုနာက်င္ေအာင္လုပ္မယ့္လူေတြက ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးျဖစ္ေနႏိုင္တာကလဲ အမွန္တရားပါ ။
အဲ့လို တစ္စုံတစ္ေယာက္က နာက်င္ေစတဲ့အခါ … ဘာျဖစ္ပါေစ ညာျဖစ္ပါေစဆိုတဲ့ က်ိန္စာေတြမတိုက္နဲ႔ ။ သူ႔အလွည့္ကိုယ့္အလွည့္ဆိုတဲ့အေတြးနဲ႔ လက္စားေခ်ဖို႔လဲ မေတြးနဲ႔ ။ ဒါေပမယ့္ ကိုယ္ရခဲ့တဲ့ဒဏ္ရာေတြကိုေတာ့ မွတ္ထားပါ ။
ျပတ္သားလိုက္ပါဆိုတာ တခ်ိဳ႕လူေတြအတြက္ မခက္ခဲေပမယ့္ တခ်ိဳ႕လူေတြအတြက္က်ေတာ့ ျပတ္သားဖို႔တကယ္ကို ခက္ခဲတတ္တယ္ အနည္းဆုံးေတာ့ ရခဲ့တဲ့ဒဏ္ရာေတြကို မွတ္ထားတတ္တဲ့ အက်င့္ေလး ေမြးေစခ်င္တယ္
လူတစ္ေယာက္ ရင့္က်က္သြားဖို႔ဆိုတာ ဒဏ္ရာေတြ လိုတာမဟုတ္ပဲ ရလာတဲ့ဒဏ္ရာေတြအေပၚ ယူတတ္တဲ့ သင္ခန္းစာေတြ လိုတာပါ … ခဏခဏ နာက်င္ရေပမယ့္ အရင္လိုပဲ ေမ့လြယ္ေပ်ာက္လြယ္သြားမယ္ဆိုရင္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္နာက်င္ေနရမွာဆိုးတယ္
သူ င့ါကို ဒီလိုနာက်င္ေစခဲ့တာပါလားဆိုတဲ့ သင္ခန္းစာေလးရသြားတဲ့အခါ ေနာက္တစ္ေယာက္က ကိုယ့္ကို နာက်င္ေစေတာ့မယ့္အခါ အနည္းဆုံးေတာ့ ေရွာင္တတ္ရွားတတ္သြားတာေပါ့ ။
ဒီလူေၾကာင့္ ငိုခဲ့ရဖူးတယ္ဆိုရင္ အနည္းဆုံးေတာ့ အဲ့လူအေၾကာင္း နားလည္သြားတာေပါ့ ။ မွတ္ထားပါဆိုတာ သင္ခန္းစာေတြ ယူႏိုင္ဖို႔ပါ စာတတ္သြားတဲ့အခါ ဘဝက ထင္သေလာက္မခက္ခဲေတာ့တာအမွန္ပါ
အေဖာ္ေတြမက္ခဲ့တဲ့ အက်င့္ေၾကာင့္ နာက်င္ခဲ့ရတယ္ဆိုရင္ တစ္ေယာက္တည္းေနတတ္လာလိမ့္မယ္ ။ ဘယ္အရာမဆို ေျပာျပတတ္တဲ့အက်င့္ေၾကာင့္ ေျပာစရာအတင္းေတြ ရသြားခဲ့တယ္ဆိုရင္ ေနာက္တစ္ခါ ၿမိဳသိပ္တတ္လာလိမ့္မယ္ ။ ဒီလိုအမွားေတြၾကားက သင္ခန္းစာေတြ ယူတတ္ဖို႔ ဒီတစ္ခါ နာက်င္ရတဲ့အခါ မွတ္ထားေပးပါ ။
သူနဲ့တန်တဲ့အရာကိုပဲ သူ့ကိုပေးလိုက်တာ ကောင်းပါတယ်